Maoritania: Fahatsiarovana Ny Fanonganam-panjakana Voalohany Nataon’ny Miaramila Teo Amin’ny Firenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Aogositra 2012 8:00 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, বাংলা, Ελληνικά, عربي
Nanamarika ny faha-34 taonan'ny fanonganam-panjakana voalohany nataon'ny miaramila tany Maoritania ny 10 Jolay 2012. Nanongana ny filoha Moktar Ould Daddah, filoha voalohan'i Maoritania taorian'ny nahazoana ny fahaleovantena tamin'i Frantsa tamin'ny 1960, ny miaramila tamin'ny 1978.
Niatrika ny fanafihan'ny miaramila foana ny firenena nanomboka teo, ny farany izao dia notarihan'ny Brigadier General Mohamed Ould Abdel Aziz, izay nanongana ny Filoha Sidi Ould Cheikh Abdallahi, filoha sivily voalohany voafidy tany Maoritania, tamin'ny 6 aogositra 2008.
Nahatsiaro ny tsingerin-taona ireo Maoritaniana mafana fo tamin'ny alalan'ny fitorahana bilaogy sy ny fandefasana bitsika mikasika izany, ary nanakiana ny fitondra-miaramila any Maoritania.
Moktar Ould Daddah, 1977. Sary avy amin'ny Tahirin-tSary anaty Aterineton'ny Romanian Communism, avy amin'ny Wikimedia Commons.
Mampatsiahy ny niseho taorian'ny fanonganana [ar] ny mpitoraka bilaogy ao amin'ny bilaogy Boutilimit Today (izay naka ny anarany avy amin'ny tanàna niavian’ ilay filoha voaongana tamin'ny 1978):
Nanomboka nanilika tsikelikely ny Faritra Trarza ireo manam-pahefana ara-politika, ary indrindra fa i Boutilimit manokana. Nanapa-kevitra ireo miaramila tampom-pahaizana vaovao ny hanova ilay tanàna ho fonjan'ireo zazalahy taranany, izay ahitana ny rahalahy sy havan'ny Filoha Ould Daddah. Anisan'ireo lasibatra voalohany ihany koa ireo manam-pahaizana avy eo amin'ny faritra. Giazana tsy hahazo hivoaka ny tranony any Boutilimit i Ahmed Ould Daddah [rahalahy tsy iray kobo amin'i Moktar Ould Daddah], izay nahafahany nitadidy ny Korany Masina. Naneho ny alahelony ny Emir Habib Ould Ahmed Salem [emiran'i Trarza] noho izy nentna tanaty kamiao tamin'ny lalana nihazo an'i Nouakchott namakivaky ny lemak'i Mederdra.
Nanoratra mikasika ny tsingerenantaona ilay mafana fo Baba Ould Brahim eo amin'ny bilaoginy Surakh Al Watan (“Ny Hiakan'ny Tanindrazana”):
Ny fanafihana dimy ambinifolo no resahana raha vao miresaka ny fanafihana tany Maoritania, ny sasany amin'ireo no nahita làlana haka ny fahefana, ny sasany kosa tsy nahavoa. Nanomboka tamin'ny fanafihana tamin'ny 1978 izany ary mbola mitohy, ary dia nijanona ho toy izany hatrany ny fitantanana ny fiainan'ireo Maoritanina mandrak'androany. Azo fehezina izy ireo, ary zaraina anaty dingana lehibe telo. Ny voalohany nanomboka ny 1978-1991, ny andiany faharoa naharitra hatramin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2005, ary ny fahatelo izay mbola tsy tapitra hatramin'izao. Azontsika lazaina hoe fanafihana iray ihany no natrehan'i Maoritania raha tsy singanina amin'ny olona sy ny anarana, satria antony iray ihany no tena fototry ny fanonganana hatrizay, ary nitovy avokoa ny fomba nanaovana azy ireo, ary nitovy ihany koa ny vokatra naterany.
Ny 10 Jolay 1978 no fotoanan'ny Maoritania tamin'ny fanonganana voalohany nataon'andiana manampahefana avy amin'ny tafika, izay nilaza fa ny manosika azy ireo dia ny ady ataon'ny tafika amin'ny Polisario izay nolazain'izy ireo hoe toe-draharaha sarotra, tsy misy irika ahitana fitaovam-piadiana, tsy misy vatsy, na fanofanana.
Ny zavatra iraisan'ny fanonganana tsirairay dia ny fanafoanana ny endrika siviliy ananan'ny fitondrana, natao mazava tsara ao anatin'ny satan'ny lalam-panorenana, izay mandrara ny fahamaroana ara-politika ary manakana ny sivily tsy handray anjara amin'ny resa-politika.
Fisamborana ireo mahery fon'ny hetsika 25 Febroary. Avy amin'ny pejy Facebook-n'ny Hetsiky ny 25 Febroary.
Mibitsika mikasika ilay tsingerintaona ny mafana fon'ny hetsiky ny 25 Febroary, Med Lemine Echvagha:
Ato anatin'ny andro vitsy dia ho feno 34 taona ny naha-teo ambany fitondrana miaramila an'i Maoritania. Aongano ny fitondrana m,iaramila, [Jeneraly] Aziz mialà teo
Nanoratra ilay bilaogera Sidi Al Tib Ould Mojteba hoe:
Mahatohina ahy ny tsingerintaonan'ity andro ratsy ity, ary mampalahelo ny mahita hoe tsy tonga saina amin'ny halalin'ity zavatra ity sy ny haratsian'ity loza ity ireo tampom-pahaizana eto amin'ny fireneko… Aongano ny fitondràna miaramila Maoritaniana.
Nanakiana ny famelomana indray ny tsingerintaonan'ny 10 Jolay nataon'ny hetsiky ny 25 Febroary ny mafana fo Baba Ould Hourma:
Maneho ny fahatsiarovantenan'ny eny ifotony momba ny olana ara-politika any Maoritania ny toerana noraisin'ny hetsiky ny 25 Febroary mikasika ny tsingerintaonan'ny fanonganam-panjakana voalohany natan'ny tafika sy fanaovana tsinontsinona ny fahefana nentim-paharazana teo an-toerana